တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဘာကြောင့် နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သလဲ – အပိုင်း (၅) | MoeMaKa Burmese News & Media
သန်းဝင်းလှိုင် - သမုိုင်းတကွေ့မှ ဒေါက်တာ ဘဟန် (ခရစ် ၁၈၉၀ - ၁၉၆၉)
တော်လှန်ရေးကောင်စီက နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၇၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော “တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်” စာအုပ် စာမျက်နှာ ၅ ၌လည်း –
ထို့နောက် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုက –
သို့သော် ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အသိမပေးဘဲ ၄င်းတစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ၄င်းကိုယ်ကျိုးအတွက် အာဏာ သိမ်းခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍များ သူပြောသလို တိုင်းပြည်ချောက်ထဲ ကျဖို့ လက်နှစ်လုံးသာလိုခဲ့ရင်၊ ကျွန်တော်တို့ကို ၂ မိနစ်သာ ကြိုတင် အသိပေးပါ။ ကျွန်တော်ချက်ချင်းအာဏသိမ်းလိုက်ပါ့မယ်” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တာဝန်စတင်ထမ်းောဆင်စဉ်က ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုကိုင်၍ ကျမ်းသစ္စာပြုခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အပေါ်တွင် သစ္စာရှိရမည်သာဖြစ်သည်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင် ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဖေ (ငြိမ်း) ၏ ဇနီး ဒေါ်သိန်းဆိုင် (စာရေးဆရာမ မမြတ်လေး) မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့် အာဏာသိမ်းရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် ဗိုလ်မှူးကြီး တန်ယုဆိုင် (ငြိမ်း) ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သော ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း (လက်နှိပ်စက်မူ) ကို ၄င်းဇနီးထံမှ တောင်းယူဖတ်ရှုခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်သိန်းဆိုင် နှင့် ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ယုဆိုင်သည် မောင်နှမ တော်စပ်ပါသည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ယုဆိုင် ရေးသားခဲ့သော ယင်းမှတ်တမ်း၌ ဗိုလ်မှူးကြီး တန်ယုဆိုင်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းသည် နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ရန် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ကြိုပမ်းခဲ့ရာ ပထမအကြိမ်တွင် နောက်လိုက်အင်အားမရှိ၍ အစီအစဉ်မအောင်မြင် ခဲ့ချေ။ တဖန် ၁၉၅၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း၏ သူရဲကောင်းသုံးယောက် ဟု အပြောများသည့် ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီးနှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်ဖေတို့သည် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု နေအိမ် အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကာ စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း လာရောက်ပြောကြားရာ၊ ဦးနုက –
5 Responses to တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဘာကြောင့် နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သလဲ – အပိုင်း (၅)
Maung Maung Myint on March 9, 2013 at 11:05 pm
Maung Maung Gyi on March 11, 2013 at 1:33 am
His name was Tan Yu Saing,aChinese name. He wasabrother-in-law of Brigadier Tin Pe. Daw Thein Saing (Mrs. Tin Pe) was his sister. He was the Inspector General of the Union Constabulary or Pyisaunt Ye (former Union Military Police Force or Sit Ye Tat).
mgoogyaw on March 10, 2013 at 5:34 pm
I will answer on behalf of the Author. It is “Tan Yu Saing”, not “Tin” Yu Saing”, also the brother of Mrs. General Tin Pe,(Daw Thein Saing). The uncle of Now (Current Government) Deputy Chairman of Parliament (Hluttaw), U Nanda Kyaw Swa, who lived in Pyi Daung Su Yeikthar Road,(Helpinn Road).
ရန်ကုန်သား on March 10, 2013 at 11:57 pm
မြန်မာပြည်ကို တရုတ်နွယ်ဖွါးစစ်ဗိုလ်တွေ ဖျက်ဆီးခဲကြတာယနေ့တိုင်ပါဘဲ။စစ်သားက စစ်ဘဲတိုက်တတ်မယ်။အုပ်ချူပ်ရေး။စံမံခန့်ခွဲရေးတိုကို ဘယ်နားလည်မလဲ။အခုလည်း ဗမာပြည်ဟာ တရုတ်ကိုလိုနီအစိပ်အပိုင်းတစ်ခုပါဘဲ။
Thar Gyaw on March 11, 2013 at 6:02 pm
Col.Tan Yu Saing was also the elder brother of Maung Ko Yu,awell known communist lawyer. He was part of NLD and later had falling out with the NLD.
ကာတွန်း မင်းထက်လူ – ဖေ့စ်ဘွတ်ကယ်ပေလို့ https://t.co/PjZKnqt5Zw https://t.co/vuBl6yV8ac about 11 minutes ago ReplyRetweetFavorite